विश्व किर्तीमानधारी कुशल भुर्तेल आइसीसीको प्लेअर अफ दि मन्थ अवार्डको लागि मनोनित – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २२ बैशाख २०७८, बुधबार ११:५६
Nepal's cricketer Paras Khadka playsashot during the one day international (ODI) cricket match of the ICC Cricket World Cup League2against Nepal at the Tribhuwan University International Cricket Ground, in Kathmandu on February 12, 2020. - The United States were bowled out for 35 by Nepal on Wednesday and joined Zimbabwe in making the lowest total ina50 over international. (Photo by Kaushal ADHIKARI / AFP) (Photo by KAUSHAL ADHIKARI/AFP via Getty Images)
विराटनगर / टि– २० क्रिकेटमा विश्व किर्तीमान राखेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर कुशल भुर्तेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी)को प्लेअर अफ दि मन्थ अवार्डको लागि मनोनयनमा परेका छन् ।
यही वैशाख ४ देखि ११ गतेसम्म टीयू मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा नेपालले उपाधि जित्दा कुशलले सर्वाधिक २ सय ७८ रन बनाएका थिए ।
उनले टी–२० डेब्युमै नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका थिए भने लगातार तीन अर्धशतक प्रहार गर्दै विश्वकीर्तिमान बनाएका थिए । सिरिजमा चार अर्धशतक प्रहार गरेका उनी प्लेअर अफ दि सिरिज भए ।
सिरिजमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा कुशल पहिलो पटक आइसीसीको टी–२० वरीयतामा पर्दै ९३ औं स्थानमा समावेश भएका थिए । त्यसपछि अपडेट भएको वरीयतामा उनी ६१औं स्थानमा उक्लेका छन् ।
यस्तै पाकिस्तानका बाबर आजमले दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध एकदिवसीय सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २ सय २८ रन बनाएका थिए । सोहि प्रदर्शनको आधारमा उनी विराट कोहलीलाई पछि पार्दै आइसीसीको नम्वर वान ओडीआई ब्याट्सम्यान बनेका थिए ।
यस्तै फखर जमानले दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध एकदिवसीय सिरिजमा ३ सय २ रन बनाएका थिए । उनले सिरिजमा दुई शतक समेत बनाए । जस क्रममा उनले दोस्रो एकदिवसीयमा १ सय ९३ रन प्रहार गरेका थिए ।